Belaaruusitti filannoo hordoofee hiriirri mormii itti fufeera – Kichuu
HomeNewsWorldBelaaruusitti filannoo hordoofee hiriirri mormii itti fufeera
Belaaruusitti filannoo hordoofee hiriirri mormii itti fufeera
Biyya pirezidantiin biyyatti mormitoota’ hantuuta’ jedhanii arrabsanitti mormiin itti fufe
Belaaruusitti mormii bu’aa filannoo biyyaaleessaa kan pirezidaanti Aleeksaandaar Lukaashenoo mo’achuu itti labsamee mormuun Sanbattan irraa jalqabee namoonni kumaatamaan daandiitti bahuun hiriira mormii gaggeessaa jiru.
Hooggantuun paartii mormiituu ammoo erga poolisoonni namoota filannoo Hagayya 9 gaggeefamee ture mormiif bahaan garmalee reebuun dhagahamee akka itti fufuun mormaniif waamicha taasifte jirti.
Pirezidaantichi garuu garaagarummaa olaanaan mo’adheera jechuun mormii irratti ka’u balaaleeffatu. Guyyaa Dilbataa deegartooti isaa biyyasaaniifi walabummaasaaniif akka dhaabbataniif waamicha taasisaniiru.
Pirezidaant Lukaashenkoon tasgabbii dhabiinsi biyyattii keessatti cimaa dhufnaan gargaarsa Raashiyaa gaafachuu dhagahameera.
(bbcafaanoromoo)—Ms Tikhaanovskaayaa gama isheetiin osoo sagaleen sirriin lakkaa’amee sagalee hanga %60-%70 argachuun nan mo’adha ture jechuun mormitee jirti.
Sababiidhuma waldhabdee kanaatinis erga ifatti sagalicha akka hin fudhanne beeksiifteen booda biyya gadhiiftee bahauun Lituuniyaatti ijoollee isheetti makamtee jirti.
Haaluma walfakkaatunis lammiilee biyyattii bu’aa filannichaa mormuuf bahan keessaa kanneen 6,700 ta’an kan hidhaman yoo ta’u, baayyee isaanii irrattis humnootii nageenyaatiin dararrii gaggeefamuutu himama.
Hojjattoonni warshaa mootummaa osoo hin hafiin torban darbe keessa bahuun hiriiratti makamanii turan. Torban kanas mormii cimaa gaggeessuun pirezidaanticha irratti dhiibbaa taasiuuf yaadamuu gabaasaan BBC Jonaa Fishar himeera.
Dilabata kaleessaa maaltu ta’ee?
Hiriirrii mormii magaalaa guddoo keessatti kan gaggeefamee yoo ta’u, hiriira mootummaaf bahame irratti ammoo namoonni kuma 31 akka hirmaatan midiyaalee biyya keessaa gabaasan.
Haata’u malee, Ministeerri Dhimma Biyyaa keessa lakkoofsa deegartootaa kuma 65 akka gahu tilamaamulleen AFPn garuu kuma 10tti siqaa jedheera.
Pirezidaanti Lukaashenkoon haasaa deegartoota isaaniif taasisaniin, Belaaruus ‘akka biyyaatti du’uu qabdi’ filannoon irra deebii gaggeeffamu qaba jedhaniiru.
Kana malees ”Asii baatanii biyya keessa, walabummaa keessa, haadha warraa keessa, obbooleetiiwwan fi daa’imman keessa ittifachuu qabdu,” jedhaniiru.
Mr Lukaashenkoo mormitoota akka antuutaatti ibsan
Gama biraatiin hojjetoonni damee mootummaa irra hojjatan dirqiidhaan hiriirarratti akka hirmaatan ykn hojiisaanii akka dhaban dorsiifamuu dhagahameera.
Guyyoota hedduuf garuu hojjattoonni waajiraalee mootummaa keessa hojjjetan osoo hin hafnee mormii pirezidaanticha irratti bahame keessatti qoda fudhatanii turan.
Osoo pirezidaantichi haasaa taasisaa jiranii, hiriirtoonni gara 220,000 ta’an ammoo mormii isaanii dhageessisuuf bakka jiddugala yaadannoo waraana addunyaa lammaffaa kan taatee Minkiitti bahuusaanii oduun marsariitii Tut.by jedhamu gabaaseera.
Magaaloota biraa keessattis deegartoonni kaadhimamtuu paartii mormiituu Tikhaanovskaayaa bahuun dhagagahameera.
Qondaaltoonni hedduun kan waajjiraalee poolisii duraafi kan ammaa hojii gadhiisaa jiraachuunis dhagahameera.
Haata’u amlee, Pirezidaant Lukaashenkoon tasgabbii dhabiinsi biyyattii keessatti cimaa dhufnaan gargaarsa Raashiyaa gaafachuu dhagahameera.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vlaadimiir Putiinis yoo rakkoonni loltoota biyya alaa Belaaruus mudatee gargaarsa waliigalaa akka taasisan waadaa galaniiru Dilabata kaleessaa.
Waan Isaayyaas itti jiruu cal’ifnee hin ilaallu!